"Dawlad" Yahoo ka xadday macluumaadka 500 milyan oo ciwaan - BBC News Somali
"Dawlad" Yahoo ka xadday macluumaadka 500 milyan oo ciwaan
23 Sebtembar 2016
Lahaanshaha sawirka FLICKR
Shirkadda Yahoo ayaa sheegtay in burcad dhanka internetka ah oo "dawlad taageero ka haysta" ay xadeen macluumaadka 500 milyan oo ciwaan, taas oo u muuqata in ay tahay xatooyadii ugu baaxad waynayd ee la shaaciyo marka laga hadlayo taariikhda xatooyada dhanka internetka.
Xatooyadaas waxaa ka mid ah macluumaad badan oo shaqsiyaad leeyihiin oo ay ku jiraan magacyo, email-lo iyo waliba "su'aalaha iyo jawaabaha ay shirkaddu ku xaqiijiyo in qofku uu yahay midkii saxda ahaa ee lahaa email-ka."
Xatooyadaasi waxay dhacday sanadkii 2014 laakiin hadda unbaa la shaaciyay.
Waaxda sirdoonka ee dalka Maraykanka ee FBI ayaa sheegtay in ay baarayso sheegashadaas.
Yahoo waxay sheegtay in waxyaabaha la xaday aysan ku jirin macluumaadka kaararka bangiyada balse ay ku kooban yihiin ciwaanno email, maalmaha dhalashada, iyo furaha sirta ah ee lagu galo e-mail-lada ama (password).
Shirkaddu waxay sheegay in macluumaadkaas ay xadeen dad taageero ka haysta dawlad balse ma aysan sheegin dawladda masuulka ka ah arrintaas.
Waxaa lagu baaqay in furaha sirta ah la badalo
Warka tilmaamaya in weerar wayn lagu qaaday shirkadda wuxuu soo baxay markii burcad magacooda ku sheegay "Peace" ay u muuqdeen in ay isku dayayeen in ay iibiyaan macluumaadka 200 milyan oo ruux.
Khamiistii ayay shirkaddu xaqiijisay in xatooyada loogaystay ay ka baaxad wayntahay sidii ay filayeen markii hore.
Yahoo macaamiisheeda oo dhan waxay kula talisay in ay badalaan furahooda sirta ah haddii aysan sidaas samaynin wixii ka dambeeyay 2014-kii.
10-kii xatooyo ee ugu cuslaa dhacdadan ka hor
MySpace accounts - 359 milyan
LinkedIn accounts - 164 milyan
Adobe accounts - 152 milyan
Badoo accounts - 112 milyan
VK accounts - 93 milyan
Dropbox accounts - 68 milyan
tumblr accounts - 65 milyan
iMesh accounts - 49 milyan
Fling accounts - 40 milyan
Last.fm accounts - 37 milyan
Xigasho - haveibeenpwned.com